Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - May 13 - site website - jluis37.com
Aston Villa na nke Everton – 1 × two – Everton @ 2.50
Ọ bụghị ihe nzuzo na ihe ịga nke ọma Aston Villan’oge a jikọtara ya na ahụike nke nwoke ahụ a ma ama, Jack Grealish. Ọ pụọla maka egwuregwu iri abụọ na abụọ Premier League gara aga, un t ndị otu na-enweta naanị 12 isi nke enwere ike 36 na oge ahụ. Onye njikwa Dean Smith ekwuola na Grealish nwere ike ịlaghachi n’etiti ndị nọchiri ihe a, mana anyị echeghị na ọdịdị ọdịdị ga-ezu iji belata Everton. Ndị Toffees dị nnọọ mma karịa ụlọ karịa na Goodison Parkn’oge a – na-apụnara ihe 36 magburu onwe ya na njegharị ma mobile jiri ya tụnyere naanị 19 na-egwun’ụlọ. Everton na-aga Villa Park ebe a, ọ ga – ga abịarukwa otu akụkụ na – egwu egwu na – enweghị onye ọkpụkpọ 1 Ollie Watkinsn’ihi nkwusioru yana nchekwa nke na – edebeghị mpempe akwụkwọ dị ọcha na nsonye 8. Nyere nke a, anyị na-achọ ohere ha iji gaa n’ihu na-aga nke a nke ịga nke ọma na-abụghị ụlọ. 1.5 nkeji.
Southampton na nke Fulham – 1 × 2 & Total – Southampton & N’okpuru 4.5 @ 2.21
Ọ bụ njem dị ọhịa maka ndị nsọn’oge a. Mgbe ha mechara bụrụ ndị mmerin’afọ Europe tupu afọ a, ha na-agbanahụ ọpụpụ. N’ikwu ya, akụkụ a dị elu karịa ndị ga-agbadata agbachitere ma nwee ike ịlaghachi. Nke a nwere ike ibido izu ụka a t egwuregwu megide otun’ime atọ ndị ọzọ dara, Fulham. Scott Parker rụrụ ọrụ ebube iji mee ka ndị Cottagers banye na Premier League n’oge gara aga, mana ebube ha adịteghị aka. Ebe ha enweghi ihe igwu egwu na obi nkoropụ nke ọpụpụ dị ọhụrụ n’echiche ha, mmụọ ha ga-ada ma ndị nsọ kwesịrị ịnụ ọbara. Agbanyeghị na ọ nweghị ihe dị na ha maka ha, ha ga-achọ ichedo ụlọ ha ma jiri nke a dị ka ikpo okwu iji nwee olile anya ịgba mgba maka ọkara ọkara n’isi oge 2021/2022. 1 nkeji.
DSC Arminia Bielefeld na TSG 1899 Hoffenheim – 1 × two – Arminia Bielefeld @ 2.70.
Arminia Bielefeld na-eche ihu n’etiti tebụl Hoffenheim ka ha na-alụ ọgụ maka nlanarị. Blog t akwụkwọ anọ dị ọcha na egwuregwu asaa Bundesliga gara aga, ịgbachitere ha siri ike emeela ka ha nwee esemokwu ịnọ. N’elu nke ahụ, isi ihe itoolu anakọtara website Id ọpụpụ isii ikpeazụ ha nwere (W2, D3, L1) bụ nke abụọ kachasị mma egwuregwu isii that a mkpọsa a. Na-agba ume, Bielefeld enwetawo ndekọ W6, L2 Bundesliga nke ụlọ na-emegide klọb tinye nke itoolu ma ọ bụ obere ma ha nabatara 11th tinye Hoffenheim. Otú ọ dị, ndị ọbịa ahụ enweghị mmeri na njem asaa nke Bundesliga (D4, L3) na naanị jikwaa ihe mgbaru ọsọ 19 pụọ n’oge niile. Na oge ha gafere nke ọma mgbe ha nwesịrị nchekwa d e mmeri ụlọ Vs akụkọ ọjọọ nke Schalke, gbakwunyere opekata mpe asatọ. Onye isi ha t team ha na No1. Onye na-eche nche, Oliver Baumann, anyị enweghị ike ịhụ otu Hoffenheim si bụrụ (ọkachasị naanị) ndị ọkacha mmasị. Na ihe niile igwu egwu na na SchücoArena, Arminia nwere ike imeri nke a. 1.5 nkeji.
Everton Vs Sheffield Utd – 1 × 2 & Otu Abụọ Icheta – Everton & Mba @ 2.19
Ọ bụ ụbọchị ole na ole dị mkpa maka Everton, yana Aston Villa pụọ ​​miniature soro Sheffield Utdn’ụlọ mgbe ụbọchị atọ gachara. Mmeri abụọ sitere na ngwakọta ndị that a ga-ahụ ha na ịchụso ebe Europa League, yana ihe ndekọ na-apụ apụ naanị website Id nke atọ dị ugbu a, ha ga-achọ ohere ha megide Villa. Nke a na-eduga anyị n’egwuregwu ụlọ megide Sheffield Utd ahapụlarị, bụ ndị na-eleghara anya n’oge a na-efunahụ 12 nke egwuregwu 14 ikpeazụ ha na-akwado ihe mgbaru ọsọ 27 n’oge ahụ. Na mbido oge ọ bụ ihe isi ike siri ike igwu egwu ma enweghị ike ị nweta goolu. Agbanyeghị nke ahụ esila na windo nkera nke abụọ nke oge a ma ha adịchaghị mma na ọgụ. Formdị ụlọ Everton adịchaghị mma mana ha ga-enwe ọlishụ na-abịa megide akụkụ Blades bụ ndị tufuru 15 nke 17 egwuregwu oge a, na-atụle ihe mgbaru ọsọ 7 dị obere n’oge ahụ. Everton iji merie nil na-ele nzọ dị mma na 2.19. Nkeji 2.
Brighton & Hove Albion FC vs West Ham United FC – 1 × 2 – West Ham United FC @ 2.50
Brighton nwere nchebe nke ọma na ọpụpụ, ma nọdụ ala d e 17th t njikọ. Ha enweghị ihe ọ bụla ha ga-egwu maka un, un mere ole na ole a na-akpọ’ezigbo ndị egwuregwu’ t group nwere ike inye ha niile ma nwee mmerụ ahụ. N’aka nke ọzọ, West Ham nọ na nsọtụ nke akụkọ ifo na-agwụ na oge ahụ, na-anọdụ isi isii n’azụ Chelsea na egwuregwu na aka. Nke a bụ ebe ọ na-adọrọ mmasị. Chelsea kwesiri igwu egwu ndi ozo di egwu na Leicester City na Aston Villa iji mechie oge ha, ebe West Ham nwere ndi ozo ha na Brighton, West Brom, na Southampton. Ọ bụrụ na Chelsea ga-enwe nrọ n’abalị ma tụfuo ha abụọ, West Ham nwere ohere ọ bụla, yabụ ha ga-apụta egbe na-enwusi ike megide Seagulls. ‘D ga-ara ara ka ị ghara ịkwado Jesse Lingard, onye nwere akara maka akara na Cup Finals. Egwuregwu ọ bụla bụ iko ikpeazụ website wont ebe a maka West Ham. 1 nkeji.
Denver jikọtara nke ọma na akụkọ ihe only eme megide Twolves. Kedu ka ị si ajụ? Ọfọn, Nuggets enwebeghị mmeri na Twolves kemgbe Eprel nke 2018. Otu egwuregwu 10 na-emeri egwuregwu, ebe mmadụ ise gara aga agafeela akara a. Nke a bụ ụdị ihe jọgburu onwe ya megide otu akụkụ, ọkachasị mgbe ị na-eburu n’uche ihe ndị dịka mmerụ ahụ, izu ike na ihe ndị yiri ya. Naanị ụbọchị ole na ole fọdụrụ na NBA, enwere naanị otu egwuregwu nwere ihe igwu egwu. Minnesota nwere ọkwa nke ise kachasị njọ na NBA na naanị mmeri 22 – oge nhụsianya maka ha. Ọ bụ ezie na Denver nọ n’ime egwuregwu nke ịmecha na nke atọ na Nzukọ Ọdịda Anyanwụ, nke ga-ahụ ka ha kụrụ nke ọma maka ịgba ọsọ ọzọ na West Finals. Enwere naanị otu nsonaazụ n’echiche m – mmeri Denver. Ma self love ole? 1 nkeji.
Ndụmọdụ obodo anyịn’izu that a sitere na let1402 ndị họrọla ndụmọdụ ndị a.
Newcastle United na Manchester City – 1 × 2 & Otu Abụọ Ichere – Man City & Mba @ 2.08
Manchester City nwere otu usoro nchebe kachasị mma nke njikọ na nke usoro kachasị mma. N’iji ya tụnyere, Newcastle enwebeghị nsonaazụ ọma na njikọ ahụ, anyị ga-eburu n’uche na City meriela otu asọmpi na Newcastle nọ naanị na 15th.
Otutu nsogbu – 316.41 *
* Nsogbu nwere ike ịgbanwe
Ọ bụrụ nhọpụta izu a na-amasị gị, nweere onwe gị idetuo website Id egwuregwu: 9879209.
Kachasị mma na akwụkwọ egwuregwu izu ụka a niile!
Uru nke Linkgba Egwuregwu Link Alternatif Joker 123